Intel PUBG Hack - Cheats၊ Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Intel က PUBG Hack
GamePron မှ Intel PUBG Hack သည် Intel-based စက်ကိုအသုံးပြုသူများနှင့်သူတို့၏ PUBG ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူ“ အကူအညီအနည်းငယ်” လိုအပ်သောသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
PUBG ၌ကြီးမြတ်သောအရသာအနည်းငယ်ကိုရယူပြီး ၁ ရက်ကြာ PUBG Intel Hack ကိုအသုံးပြုပါ။
ကြီးမြတ်သောအရသာထက်အနည်းငယ်ပိုသောအရာများကိုရှာဖွေနေပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ PUBG Intel Cheat သို့တစ်ပတ်ကြာဝင်ခွင့်ရရှိသည်။
သုံးစွဲသူများသည်ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် PUBG Intel Hack ကို ၁ လကြာ ၀ င်ခွင့်ပြုထားသည်။
သင်၏ပြိုင်ဘက်များအပေါ်အားသာချက်တစ်ခုရရှိရန်ကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တစ်ခါမျှရိုးရှင်းပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းသော့ကို ၀ ယ်ရုံဖြင့်၊ PUBG Cheat ကို download လုပ်ပါ၊ ပြီးလျှင်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ထည့်ပါ။ GamePron နှင့်လွယ်ကူပါသည်။
PUBG Intel Hack သတင်းအချက်အလက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ PUBG Intel Hack ကို Windows 10 မှထောက်ပံ့ထားပြီး Intel သာ CPU အတွက်သင့်လျော်သည်။ ဤ cheats များသည် HWID သော့ခတ်ထားခြင်းခံရသော်လည်းအကြောင်းကောင်း ရှိ၍ ၎င်းကိုအလိုအပ်ဆုံးသူများအတွက်အပို ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ် Intel တွင်ဤနေရာ၌ HWID unlock option ကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ သငျသညျ PUBG Hack ၌တွေ့မြင်ရန်မျှော်လင့်ထားထက်ပိုမို features တွေနှင့်အတူ Gamepron အွန်လိုင်း PUBG Cheats ၏အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးဖြစ်လာသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်မရပ်တန့်နိုင်သည့်အနိုင်ရသည့်စက်တစ်လုံးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲလိုပါကထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏ PUBG Intel Cheat ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။
PUBG intel hack တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်အလက်များစွာမှာ gamepron ရှိ Visual နှင့် Aimbot လုပ်ဆောင်ချက်များ။ ဂိမ်းထဲမှာဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကိုရှာဖွေဖို့ Enemy ESP (Bones, Health, Visibility checks, …) တွေကိုသုံးပြီးသူတို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ရန်သူ ESP (အရိုးများ၊ အသင်းအဖွဲ့ / ဖော်ရွေစစ်ဆေးမှုများ)
ရန်သူအချက်အလက် (ကျန်းမာရေး၊ အဝေးသင်)
မှတ်ဉာဏ်သို့မဟုတ် mouse ကို aimbot
ချိန်ညှိ FOV & ချောမွေ့
Kick, Recoil စိတ်ကြိုက်
RCS (Recoil ထိန်းချုပ်မှုစနစ်)
PUBG Intel အကြောင်း
ဒီ cheat ကိုအသုံးပြုရတာမလွယ်ကူလှပါဘူး။ ဒါကြောင့် Gamepron မှာအစပြုသူတွေနဲ့စစ်ပြန်တွေကိုအမြဲကြိုဆိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဟက်ကာများမှအကျိုးအမြတ်ရရှိရန်အတွေ့အကြုံရှိသောဟက်ကာများအတွက်လိုအပ်သောအင်္ဂါရပ်များရှိသော်လည်း၊ သာမန်လူများအနေဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလွယ်ကူစွာကိုင်တွယ်နိုင်ရန်အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ cheat stream-proof သည် OBS ကဲ့သို့သောမှတ်တမ်းတင်ဆော့ဖ်ဝဲအားလုံးထဲမှာဝှက်ထား၏။ PUBG Intel Cheat ကိုအသုံးပြုနေစဉ် PUBG ကိုမျက်နှာပြင်အပြည့်ဖြင့်ကစားနိုင်ပြီး၊ ဒီ tool ကကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်သင့်ရဲ့ anti-cheat protection ကို disable လုပ်ဖို့လိုသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ tool အားလုံးသည် ၁၀၀% လုံခြုံစိတ်ချရသည်။
ဘာကြောင့် PUBG Intel ကိုအခြားပံ့ပိုးသူများထံမှအသုံးပြုရတာလဲ။
Gamepron သည်ထုတ်လုပ်မှုတိုင်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများ၏အရည်အသွေးကိုအာမခံပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်မကိုက်ညီသောထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုထုတ်ဝေရန်ကျွန်ုပ်တို့ဘယ်တော့မျှမရဲရဲကြပါ။ ကုမ္ပဏီအများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခြေရာကိုလိုက်လျှောက်ရန်နှင့်အရေအတွက်အပေါ်အရည်အသွေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် hack developer များကသူတို့၏ကိရိယာများအားတစ်ခုလုံးထုတ်ပေးသည့်နည်းလမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ဒီနေရာမှာ Gamepron မှာရွေးချယ်စရာကိရိယာတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုအရည်အသွေးမပေးဘဲကမ်းလှမ်းနိုင်တယ်။
သင်ကိုင်တွယ်ရန်“ အလွန်အကျွံ” ဖြစ်ခြင်းကို hacking လုပ်မည်ကိုသင်စိုးရိမ်ပါက၊ ထပ်မံစဉ်းစားပါ။ အသုံးပြုသူများအားလုံး Gamepron ၌ကြိုဆိုခြင်းကိုသေချာအောင်ပြုလုပ်လိုခဲ့သည်။
သင့်ရဲ့ menu ကိုရှုပ်ထွေးစေပြီးသင်၏ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ကစားသမားအများစုသည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် hacking လုပ်နေကြသည်၊ သင့်ထံတွင်သင့်ကျောထောက်နောက်ခံရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် hacking လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြစ်နိုင်သမျှပုံမှန်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်လက်ဖြင့်ထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲကိရိယာကိုမဖွင့်မီအရာအားလုံးကိုကောင်းမွန်စွာပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ။ သင်၏အသင်းဖော်များကသူတို့၏မလွှဲမရှောင်နိဂုံးသို့ရောက်ရန်အလုပ်များနေစဉ်သင်နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်ရန်စီစဉ်ခြင်းနှင့်အထိခိုက်လွယ်ဆုံးပစ်မှတ်များကိုဖေါ်ထုတ်ရန်အလုပ်ရှုပ်နေလိမ့်မည်!
ဤသည် cheat ပြည်တွင်းဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် BIOS ထဲရှိလုံခြုံမှုရှိသော boot သည်ဒီ cheat ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ပိတ်ထားခြင်းသည်အရေးမကြီးပါ။ အလုပ်မလုပ်တော့ပါက Error သည်အဆုံးသတ်သွားလိမ့်မည်။
A6 ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင့်အနေဖြင့် fullscreen သို့မဟုတ်အခြား resolution mode ဖြင့်ကစားနိုင်သည်။
PUBG သည်ခွင့်မလွှတ်နိုင်သောကြောင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ရှိကစားသမားအားလုံးသည်ဤ tool ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်အကျိုးရှိလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Intel PUBG Hack နှင့်အရေးကြီးသောအခြေအနေများတွင်သင်သည်ဘယ်သောအခါမျှအမှားမလုပ်နိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကြယ်ဟက်ကာများကို အသုံးပြု၍ PUBG King (သို့မဟုတ် Queen!) ဖြစ်လာသည်။
အဆင်သင့် စိုးမိုး Intel Hack နည်းနှင့်လား?